राम कार्कीलाई खुला पत्र « Loktantrapost
१ पुष २०७४, शनिबार ०९:३७
माननीय राम कार्कीज्यू नमस्कार,
नयाँ संविधानले ब्यवस्था गरेको नयाँ संरचना सहितको प्रतिनिधि सभामा झापा क्षेत्र नं. १ बाट बिजयी बन्नु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना । यहाँका जनताले तपाईलाई आफ्नो समृद्धिको सम्बाहकका रुपमा मत दिएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा जनमतको कदर गर्दै त्यस अनुरुप अगाडि बढ्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
चुनावताका ‘पाहुना’ भनेर लेख्ने मध्येमा एक जना म पनि भएको कुरा तपाईलाई अवगत नै छ । म पत्रकार हो, त्यसैले कसैको भजन गाउने भन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर कलम चलाउनु मेरो पहिलो कर्तब्य हुन्छ । तसर्थ तपाईका बारेमा चुनाव अघि लेखेको बिषय झापा क्षेत्र नं. १ को इतिहास र तपाईसँग जोडिएको यथार्थ थियो । यथार्थ लेख्दा आज एउटाको पक्षमा देखिएला त भोलि अर्कोको पक्षमा देखिएला, त्यस्तो अवस्था यो भन्दा अगाडिदेखि नै पनि मैले भोग्दै आइरहेको छु । तर यस्ता कुराले मलाई कहल्यै बिचलित बनाएन पनि र बनाउने पनि छैन । यथार्थलाई कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहमा बदल्ने काम मबाट कहिले भएको पनि छैन र हुँदैन पनि ।
आदरणीय राम कार्कीज्यू,
यसपटकको निर्वाचनबाट जुन परिणाम आएको छ त्यसले खास अर्थ बोकेको छ । देशैभरिबाट बाम गठबन्धनका पक्षमा जुन जनलहर आयो, यो कुनै चमत्कार भएको भनेर सायदै कसैले बुझ्दैन । किनकि यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यसमा थप बल पु¥यायो एजेण्डाबिहिन भएर चुनावमा होमिएको काङ्ग्रेसले । जनताको तत्कालको चाहना बुझ्न नसके पछि आज आफुलाई सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको सच्चा हकदार बताउने काङ्ग्रेसको यो हबिगत भएको छ । त्यसैले जनताको चाहना नबुझ्दा हुने क्षतिको आँकलन गर्न अरु केही भनिरहनु पर्दैन मात्र अहिलेको काङ्ग्रेसको हबिगत हेरे सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।
खासगरी मैले माननीय राम कार्कीज्यूलाई यो खुला पत्र मार्फत केही बिषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेको छु ।
झापा क्षेत्र नं. १ को बिगत त्यति आशलाग्दो छैन । यस क्षेत्रमा सांसदको उम्मेद्वार बन्न आएकाहरुमध्ये धेरैजसो यस क्षेत्रमा मूल बसोबास नभएकै मानिस हुनुहुन्थ्यो । यस क्षेत्रमा अन्य जिल्लाबाट आएर चुनाव लडेकाहरुले फर्केर यो क्षेत्रमा दोहो¥याएर आएनन्, किनकि उनीहरुले यहाँ केही गरेनन् । हारेका त आएनन् आएनन्, जितेकासम्मले पनि यस क्षेत्रका बारेमा सोचेनन् र आज तपाईले घुम्दै गर्दा हेर्नु भयो होला समृद्ध भनिने झापाको यहाँको हालत कस्तो छ ?
तपाई पनि अन्य जिल्लाबाटै उम्मेद्वार बन्न झापा–१ आउनु भएको कुरा कसैले मान्ने र नमान्ने भन्दा पनि यथार्थ हो । तर तपाईलाई यहाँका जनताले ‘पाहुना’बाट ‘घरमुली’ बनाएका छन् । जुन कुरा तपाईले कहिल्यै बिर्सनै नहुने कुरा हो । जनमतको सम्मान गर्दै हिजो ‘पाहुना’ भन्ने मैले आजबाट तपाईलाई ‘झापा क्षेत्र नंं. १ को मुली’को रुपमा स्वीकार गरिसकेको छु ।
तपाईलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेर मुलुकलाई निकास दिन सक्ने नेताका रुपमा मैले बुझेको छु । हाम्रो भूगोल भित्रका बौद्धिक नेताको सूचीमा तपाईलाई पनि सूचीकृत गरिएको छ । यसरी हेर्दा अब तपाई आबद्ध बाम गठबन्धनको सुबिधाजनक बहुमतको सरकार बन्दैछ । तपाई त्यो सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो प्राबिधिक कुरा होला, तर तपाई यो क्षेत्रको सांसद अब ५ बर्षलाई रहिरहनु हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिको गोलचक्करमा फँसेर तपाईले यो क्षेत्रलाई बिर्सिने छुट पाउनु हुन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमा मात्र होइन नेपालका अन्य सबै नाका भन्दा बढी सभ्भावना बोकेको नाका रुपमा रहेको यो क्षेत्र मुलुकको दीगो विकासमा सहयोगी बन्न सक्ने अवस्थामा छ । केही घण्टा कै अन्तरालमा तीन वटा देश पुगेर फर्कन सक्ने यो पूर्वी नाका तपाईको क्षेत्रमा भएकै कारणले पनि तपाईको कुशल नेतृत्व पायो भने यो क्षेत्रले मुलुक कै कायापलट गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
पत्रकार भएकाले चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा मैले तपाईको थुप्रै कार्यक्रमहरु हेरेको छु । तपाईले चुनाव अघि भोट माग्दै गर्दा माक्र्सबाद र समाजबादको चर्चा राम्रैसँगले गर्नु भएको मैले पाएको छु । सायद यस अघि कहिल्यै चर्चा नभएको माक्र्सबाद यसपटक चुनावमा तपाई उम्मेद्वार भएकै कारणले यस क्षेत्रमा खुबै चर्चाको विषय बन्यो । चुनाव जिते लगत्तै पनि तपाईले माक्र्सबाद र समाजबाद पढाउने विद्यालय खोल्ने कुरा गर्नु भयो ।
मलाई यहाँनेर तपाईलाई केही भन्न मन छ । खासगरी माक्र्सबादका ठेलीका कुरा पढाउने कसलाई हो ? जसले बुझ्नु पर्ने हो तिनले खोजेर पनि पढ्छन् तर जसलाई चाहिएको हो, उसलाई पढाएर होइन, व्यवहारमा अनुभूति हुनेगरी दिन सक्नु पर्दछ । तपाईले भन्दै गरेको माक्र्सबाद गरीव र निमुखा जनताले भाषण र किताबबाट बुझ्दैनन् । बिहान बेलुकाको छाक टार्ने सहज ब्यवस्था नै तिनका लागि माक्र्सबाद या समाजबाद हो । बाटाहरु धुलाम्ये छन्, चिल्ला सडकमा हिँड्न पाउनु नै हाम्रा गाउँवासीका लागि समाजबाद हो । उपचार नपाएर विपन्नहरु रोग पालेर बस्न विवश छन्, तिनका लागि निःशुल्क उपचार नै माक्र्सबाद हो ।
यस क्षेत्रका जनताले तपाई माक्र्सबादको जानकार हो र सदनमा गएर माक्र्सबाद बुझाउनु हुन्छ भनेर भोट दिएको कम्तीमा म चाहिँ मान्दिन । मेरी ८० बर्षीया बुढीफुपूले तपाईलाई भोट दिएर आए पछि मैले सोधेको थिएँ– ‘राम कार्कीलाई किन भोट दिनु भयो हजुरआमा ?’ भन्दा उहाँको उत्तर आयो–‘भत्ता ५ हजार पु¥याउँछ रे नि त ।’ हो, सबैले आ–आफ्नै ढङ्गबाट सोचेर तपाईलाई मतदान गरेका छन् ।
खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा जुन सपना नेपाली जनतालाई देखाउनु भएको छ, त्यसको परिणाम हो यो नतिजा । र, तपाई पनि त्यस भित्र पर्नु भयो । नेपाली प्रधानमन्त्री कसैले यस अघि नेपाली जनतालाई समृद्धिको सपना यति धेरै देखाएका थिएनन् । जे होस् जुन सपना केपी ओलीले देखाउनु भयो, अब तपाई जस्ता ओलीका सारथीले त्यो सपना पूरा गर्न सघाउने बेला आएको छ ।
राम कार्कीज्यू ,
तपाईले चर्चा गर्नु भएको माक्र्सबाद यस क्षेत्रका जनताको समृद्धिमा रुपान्तरण गरेर देखाउनु होला । धुलाबारीबाट चन्द्रगढी जाने बाटो गुणस्तरीय कालोपत्रे हुनु हाम्रालागि माक्र्सबाद हो । चारआलीबाट चन्द्रगढी हुँदै केचना जाने सडकमा धुलो नउडाई यात्रा गर्न पाउनु हाम्रा लागि माक्र्सबाद हो । अझै पनि तपाईको क्षेत्रमा तीन हजार भन्दा बढी शौचालय बन्न बाँकी छ हो ती घरहरुमा शौचालय बन्नु माक्र्सबाद हो । तपाईलाई भोट दिने सयौँ जनताको आफ्नो एक टुक्रा जमिन छैन, टाउको लुकाउन बनाएको घरको खम्बा अडिएको जमिन कि त साहुको नाममा छ, कि त राज्यको नालायकपनका कारण बर्षौदेखि बसे पनि अझै आफ्नो भन्न नपाएर ऐलानी अवस्थामा छ ।
त्यति मात्र होइन, ऐलानी जग्गालाई धनी पुर्जा बाड्ने थुप्रै आयोगले दिएको निकम्मा धनीपुर्जा अब चाहिएको होइन । अब बाडिने धनीपुर्जाले भोलिपल्टै बैङ्कमा धितो राखेर केही लगानी गर्न पाइने धनीपुर्जा बितरण प्रणाली शुरु गर्नु हाम्रा लागि माक्र्सबाद हो । बाहुनडाँगीबासीले जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउनु हाम्रा लागि माक्र्सबाद हो । बिषादीयुक्त तरकारी खाएर मासिक ५० जनाभन्दा बढीलाई क्यान्सरको महामारीले गाँज्दै गरेको जिल्लाबासीलाई आफ्नै करेशामा तरकारी बाली लगाउनु पर्छ भन्ने चेतना फैलाउने नीति मेरा लागि माक्सँबाद हो ।
पूर्वी नेपालका युवालाई आफ्नै ठाउँमा चिकित्सकीय अध्ययन गराउँछु भन्दा एउटा निजी संस्थाले सम्बन्धन नपाएर छटपटी व्यहोर्नु परिरहेको बिडम्बना भोगिरहेको जिल्लाको बासी हुनु परेको अवस्थाबाट मुक्त गराएर हाम्रा सन्तानले घर बसी बसी डाक्टर बन्न पाउने अवस्था सृजना गर्नु मेरा लागि माक्र्सबाद हो । त्यसैले माक्र्सबाद पढाउने बिद्यालय र एक लाख माक्र्सबादका शिक्षक उत्पादन गर्ने होइन माननीयज्यू देश कै सर्वाधिक युवा बैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाको बासी भएका नाताले लाखौं युवालाई मुलुक भित्र स्वरोजगार बनाएर खाडी मुलुकबाट फर्काउने शीप र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने समृद्धिको खाका ल्याउनु असली माक्र्सबाद हुने छ ।
अन्त्यमा, तपाईलाई एउटा स्मरण गराउँ कि आज लालबाबु पण्डितले काङ्ग्रेसको गढमा गएर तीनका हिमायतीलाई जनमतबाट जुन झापड हाने, त्यो अरु केही नभएर छोटो समय मन्त्री हुँदा देश र जनताको हितका लागि उनले गरेको सत्कर्मको परिणाम नै हो । त्यसैले अब जनताले तपाईको सैद्धान्तिक माक्र्सबाद होइन, व्यावहारिक माक्र्सबाद खाेिजरहेको स्पष्ट भइसक्यो ।
तपाई पनि मन्त्री त हुनु भयो । तर, त्यो मन्त्री हुँदाको काम तपाईको चुनावी मुद्धा बनेन, किनकि लालबाबु, जनार्दन शर्मा, गगन थापा र गोकर्ण बिष्ट जस्तो तपाईको मन्त्रित्वकाल चर्चायोग्य रहेन । त्यसैले मेरो आग्रह छ–झापा क्षेत्र नं. १ ले बिगतलाई फेरि पल्टाएर तपाईलाई पनि त्यही सूचीमा राख्नु नपरोस् ! मेरो कामना छ ।
उही तपाईको शुभचिन्तक,